Biliary Atresia (သည်းခြေရည်ပြွန်ကျဉ်းမြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း) - Hello Sayarwon
HelloSayarwon » ကျန်းမာရေး အခြေအနေများ » ကျန်းမာရေးအားလုံး » ကျန်းမာရေးအခြေအနေများ » Biliary Atresia (သည်းခြေရည်ပြွန်ကျဉ်းမြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း)
Biliary Atresia (သည်းခြေရည်ပြွန်ကျဉ်းမြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း) ကဘာလဲ။
သည်းခြေရည်ပိတ်ဆို့မှုဆိုသည်မှာသည်းခြေရည်ပြွန်တွင် ပိတ်ဆို့မှုတစ်ခု ဖြစ်စေသောရှားပါးသောအခြေအနေတစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ အသည်းပြွှန်ဟုလည်းခေါ်သောအသည်းတွင်းမှ သည်းခြေရည် ပြွှန်သည် သည်းခြေရည်များကိုအသည်းမှ သည်းခြေအိတ် သို့ သိုလှောင်ရန်အတွက် သယ်ယူသွားပြီးအူငယ်များသို့ အစာခြေခြင်းတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် သယ်ယူပါသည်။
သည်းခြေရည် သည် အသည်းမှ ပြုလုပ်သောအရည်တစ်မျိုးဖြစ်ပြီးအဓိကတာဝန် နှစ်ခုကိုထမ်းဆောင် ပါသည်။ ၎င်းတို့မှာအဆိပ်အတောက်များ နှင့် အညစ်အကြေးများကို ခန္ဓါကိုယ် ပြင်ပသို့ သယ်ဆောင်သွားခြင်းနှင့် ခန္ဓါကိုယ် မှ အဆီများကိုခြေဖျက်ခြင်းနှင့် အဆီတွင် ပျော်ဝင်သောဗီတာမင် အေ၊ ဒီ၊ အီး နှင့် ကေတို့ကိုစုပ်ယူရန် ကူညီခြင်းတို့ဖြစ်သည်။
သည်းခြေရည် ပြွှန် ပိတ်ဆို့ပါကသည်းခြေရည်များသည် အသည်းထဲတွင် စုပြုံ လာပြီးအသည်းပျက်စီးခြင်းကို ဖြစ်စေပါသည်။ ထိုအခါ အသည်းသည် ခန္ဓါကိုယ်မှ အဆိပ်အတောက်များစွန့်ထုတ်ရန် ခက်ခဲစေပါသည်။
သည်းခြေရည်ပိတ်ဆို့မှုသည် သန္ဓေသားဘဝတွင်ဖြစ်ခြင်း နှင့် မွေးဖွားပြီးခါစတွင်ဖြစ်ခြင်းဟူ၍နှစ်မျိုးရှိပါသည်။ သန္ဓေသားသည်းဖြေရည်ပိတ်ခြင်းသည် ကလေးငယ်သားအိမ်ထဲတွင်ရှိချိန် တွင် ဖြစ်ပေါ်ပါသည်။
မွေးဖွားပြီးခါစသည်းခြေရည်ပိတ်ခြင်းသည် ပို၍အဖြစ် များပါသည်။ မွေးဖွားပြီး နှစ်ပတ်မှ လေးပတ်အကြာအထိမသိသာမထင်ရှားသေးပါ။ သန္ဓေသားအဖြစ် ရှိနေသောကလေးငယ်များသည် နှလုံး၊ ဘေလုံး နှင့် အူများတွင်လည်းမွေးရာပါ ချို့ယွင်းချက် များရှိနိုင်ပါသည်။
Biliary Atresia (သည်းခြေရည်ပြွန်ကျဉ်းမြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း) က ဘယ်လောက်အဖြစ်များသလဲ
သည်းခြေရည်ပိတ်ဆို့မှုသည် ရှားပါးပြီးကလေးငယ် ၁၈၀၀၀ တွင် ၁ ယောက်သာလျှင် ဖြစ်ပွားပါသည်။ အမျိုးသမီးများ၊ လမစေ့သောကလေးငယ်များနှင့် အာရှ သို့မဟုတ် အမေရိကန် အာဖရိက အနွယ်ဝင် ကလေးများတွင် ပို၍ဖြစ်ပွားပါသည်။
Biliary Atresia (သည်းခြေရည်ပြွန်ကျဉ်းမြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း) ရဲ့လက္ခဏာတွေကဘာတွေလဲ
ပထမဆုံးပေါ်သောရောဂါလက္ခဏာသည် အသားဝါခြင်း နှင့် မျက်လုံးဝါခြင်းတို့ဖြစ်ပါသည်။ အသားဝါခြင်းသည် သတိပြုမိရန် ခက်ခဲပါသည်။ ထုံးစံအားဖြင့် မွေးပြီးစတစ်ပတ် နှစ်ပတ်တွင် ကလေးငယ်များသည် မပြင်းထန်သောအသားဝါခြင်း ဖြစ်ပြီး နှစ်ပတ် သုံးပတ်ကြာသောအခါ ပျောက်ကွယ်သွားပါသည်။
သို့သော်လည်းသည်းခြေရည် ပိတ်ဆို့မှုရှိသောကလေးသည် အသားဝါခြင်းတဖြည်းဖြည်းဆိုးရွှားလာပါသည်။
မီးခိုးရောင်သို့မဟုတ် အဖြူရောင် ဝမ်းများသွားခြင်း
မွေးဖွားပြီး နှစ်ပတ် သုံးပတ် ကြာသည်အထိသင်၏ကလေးတွင် အသားဝါခြင်း နှင့်အဖြူရောင် ဝမ်းသွားခြင်းတို့ဖြစ်ပါကဆရာဝန်ထံသို့ အမြန်သွားရောက်ပြသပါ။
Biliary Atresia (သည်းခြေရည်ပြွန်ကျဉ်းမြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း) ကိုဘာတွေကဖြစ်စေသလဲ
Biliary Atresia (သည်းခြေရည်ပြွန်ကျဉ်းမြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း) ဖြစ်နိုင်ခြေကိုဘာတွေက မြင့်တက်စေသလဲ
အောက်ပါအချက်များသည် Biliary atresia ဖြစ်ပွားမှုနှုန်းကို မြင့်မားစေပါသည်။
မွေးဖွားပြီးနောက် ဗိုင်းရပ်စ်နှင့် ဘတ်တီးရီးယားကူးစက်မှု ခံရခြင်း
အသည်းနှင့် သည်းခြေပြွန်အား ပြန်လည်တိုက်ခိုက်သောကိုယ်ခံအားဆိုင်ရာချို့ယွင့်မှု
အသည်းနှင့် သည်းခြေပြွှန်၏ မွေးရာပါ ချို့ယွင်းမှု
Biliary Atresia (သည်းခြေရည်ပြွန်ကျဉ်းမြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း) ကို ဘယ်လိုအတည်ပြုပါသလဲ
မှန်ကန်သောရောဂါအဖြေရရှိရန် ဆရာဝန်သည် အောက်ပါစစ်ဆေးမှု များကိုလုပ်ဆောင်ရမည် ဖြစ်သည်။
Biliary Atresia (သည်းခြေရည်ပြွန်ကျဉ်းမြောင်းပိတ်ဆို့ခြင်း) ကို ဘယ်လိုကုသပါသလဲ
သည်းခြေရည်ပိတ်ဆို့မှုကိုများသောအားဖြင့် ခွဲစိတ်ကုသမှုပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် ကုသပါသည်။ အထူးသဖြင့် အသည်းအစားထိုးကုသခြင်းနှင့် Kasai လုပ်ထုံးတို့ဖြစ်ကြသည်။
သည်းခြေရည်ပိတ်ဆို့မှုအတွက် ပထမဦးစားပေးကုသမှုဖြစ်ပါသည်။ Kasai လုပ်ထုံးတွင် ခွဲစိတ် ဆရာဝန်သည် ကလေးငယ်၏ ပိတ်ဆို့နေသောသည်းခြေရည်ပြွှန်ကိုဖယ်ရှား၍အူအခွေ တစ်ခုကိုယူကာ ၎င်းဖြင့် နေရာလဲလိုက်ပါသည်။
ထိုအခါ သည်းခြေရည်များသည် အူငယ်ဆီသို့ တည့်တည့် မတ်မတ် စီးဆင်းသွားပါသည်။ ခွဲစိတ်မှု အောင်မြင်ပါကလူနာသည် ကျန်းမာရေးကောင်းမွန်လာကာအသည်းပြဿနာခံစားရတော့မည် မဟုတ်ပါ။
Kasai လုပ်ထုံးမအောင်မြင်ပါကကလေးငယ်သည် ၁-၂ နှစ်အတွင်းအသည်းအစားထိုးကုသမှုလိုအပ်ပါလိမ့်မည်။
အစားထိုးကုသမှုအောင်မြင်ပါသော်လည်းကလေးအများစုတွင်အရွယ်ရောက်ချိန်၌သည်းခြေရည်ပိတ်မှုကြောင့်ဖြစ်သောနာတည်ရှည်အသည်းရောဂါ ဖြစ် နိုင်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးငယ်များသည် အသည်းစွမ်းဆောင်ရည် ကိုစောင့်ကြည့်ရန် ပုံမှန် စစ်ဆေးမှုများလိုအပ်ပါသည်။
အစားထိုးခွဲစိတ်ကုသမှုဆေးပညာ၏ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုများသည် အစားထိုးထားသောအသည်း၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့်အကျိုးကျေးဇူးရရှိမှုကိုမြင့်တက်စေပါသည်။
အရင်ကအစားထိုးကုသမှုသည် သေဆုံးသွားသောကလေးငယ်များအသည်း လှူဒါန်းမှသာလုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ယခုတွင်မူခွဲစိတ်ကုသမှု၏ဖွံဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်အတူအရွယ်ရောက်ပြီးသူများ၏အသည်းကိုကလေးငယ်များတွင် အစားထိုးနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။ အရွယ်အစားသေးခြင်းသို့မဟုတ် ခွဲခြမ်းကာအစားထိုးခြင်းဟုခေါ်သည်။
အောက်ဖော်ပြပါလူနေမှုပုံစံများနဲ့အိမ်သုံးကုထုံးများသည်သည်းခြေရည်ပိတ်ဆို့မှုကိုကုသသော နေရာတွင် အကူအညီပေးနိုင်ပါသည်။
သည်းခြေရည်ပိတ်ဆို့မှုဖြစ်ပွားသောကလေးများသည် များသောအားဖြင့် အာဟာရငတ်မွတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် ကလေးငယ်များသည် နေ့စဉ် အစားအစာထဲတွင် ကယ်လိုရီများများပါရန် လိုအပ်ပါသည်။
အသည်းအစားထိုးကုသမှုအပြီးတွင် ကလေးငယ်အများစုသည် ပုံမှန် စားသောက်နိုင်ပါသည်။ သို့သော် ကလေးငယ်အတွက် သင့်တော်သောအစားအစာကိုရွေးချယ်နိုင်ရန် ကလေးအထူးကုဆရာဝန်နှင့် အမြဲတိုင်ပင်သင့်ပါသည်။
Biliary Atresia. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases (NIDDK).
http://www.niddk.nih.gov/health-information/health- topics/liver-disease/biliary-atresia/Pages/facts.aspx. Accessed on 28/07/2015
Biliary Atresia: MedlinePlus Medical Encyclopedia. National Library of Medicine - National Institutes of Health. http://www.nlm.nih.gov/medlineplus/ency/article/001145.htm. Accessed on 28/07/2015